रामचन्द्र पौडेलले बाबुरामलाई भने : उरन्ठ्याउलो बुद्धिले नेपाली समाजलाई कहिँ पुर्‍याउँदैन « AayoMail
रामचन्द्र पौडेलले बाबुरामलाई भने : उरन्ठ्याउलो बुद्धिले नेपाली समाजलाई कहिँ पुर्‍याउँदैन
2021,22 July, 10:15 am
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई उरन्ठ्याउलो बुद्धि भएको बताएका छन्।
पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत डा. बाबुराम भट्टराईको उरन्ठ्याउलो बुद्धिले नेपाली समाजलाई कहिँ नपुर्‍याउने बताए। पौडेलले हजारौं वर्षदेखि जुन सामाजिक मान्यता, आस्था बोकेर श्रेष्ठ र पवित्र जीवन बिताउँदै आएका छौं त्यही सामाजिक मान्यता र आस्थामाथि भट्टराईले गम्भीर आघात पुर्याएका आरोप लगाएका छन्।
पौडेलले लेखेका छन्, ‘हजारौं वर्षदेखि हामीले जुन सामाजिक मान्यता, आस्था बोकेर श्रेष्ठ र पवित्र जीवन बिताउँदै आएका छौं, त्यही सामाजिक मान्यता र आस्थामाथि गम्भीर आघात पुर्‍याउने डा. बाबुराम भट्टराईको उरन्ठ्याउलो बुद्धिले नेपाली समाजलाई कहिँ पुर्‍याउँदैन।’
किन भने पौडेलले त्यसो?
भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा केही दिनअघि एक तस्बिर सार्वजिक गरेका छन्। जसमा भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ पित्तलको एक गाग्रीबाट नदीमा दूध पोखिरहेका देख्न सकिन्छ।
सोही तस्बिर भट्टराईले सार्वजनिक गर्दै अंग्रेजीमा लेखेका छन्,‘Circulated by my classmates in India’ अर्थात भारतका मेरा सहपाठीले प्रसारित गरेको तस्बिर।
अंग्रेजी क्याप्सन दिइएको तस्बिरमा भनिएको छ,‘फेथ इज डेन्जरस थिंग। इट मेक्स यु थ्रो अवे मिल्क एण्ड ड्रिन्क युरिन।’ अर्थात, विश्वास एक खतरनाक कुरा हो, जसले तपाईंलाई दुध फ्यालेर पिसाब पिउन लगाउँछ।
भट्टराईले सेयर गरेको यही तस्बिरको अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ। धर्मजस्तो आस्थाको कुरामा भट्टराईले गरेको टिप्पणीको निन्दा गरिएको छ। भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) का विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइबाले, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालगायतले त्यसप्रति टिप्पणी गरेका छन्।
योगी आदित्यनाथलक्षित बाबुरामको ट्विटमाथि यसरी भइरहेको छ टिप्पणी